Vokatra mpamokatra & mpamatsy | Fividianana entana any Chine
Fikosoham-bary mitoto ho an'ny SAG
Ny fitotoana Cylpebs
Ny lamba mifangaro
Ireo basy mitoto no ampiasaina ho toy ny fampahalalam-baovao mifangaro ao amin'ny milina famosaham-bary. Mandritra ny fizotran'ny serivisy, ny tehina mitoto tsy tapaka matetika dia miasa amin'ny fomba fandroahana. Ny tehina mitoto no mahatonga ny mineraly ao anaty elanelam-bolo ka ho mendrika ny fiantraikany amin'ny alàlan'ny fihenjanana sy ny fikosoham-bary miaraka amin'ny habeny mihena.
Na milina SAG na milina fitotoana baolina dia miaro ny akoran'ny cylindrical ary misy fiantraikany amin'ny hetsika fanaovan-gazety mifangaro.
Tsy toa ny baolina, ny fahamailinana amin'ny fametahana cylpebs dia eo anelanelan'ny baolina sy ny tsorakazo, indrindra amin'ny alàlan'ny fifandraisana an-tserasera handrava ny mineraly.
Ny dingana Semi-autogenous fikosoham-bary dia endrika iray amin'ny fizotran'ny autogenous. Ny fizarana haino aman-jery dia misy fizarana roa: bola sy famoronana baolina. Ny fitrandrahana mineraly dia iankinan'ny Impact ary manosika eo anelanelan'ny baolina, vy ary linera.
Famatotra baolina ho an'ny Mill Mill
Fitaovana ilaina amin'ny fikosoham-bary ny milina baolina rehefa vita ny famotehana. Mitohy amin'ny fikaroharoana mineraly miaraka amina haino aman-jery mifangaro izany mba hahatratrarana faran'izay ilaina.
Familiana baolina ho an'ny fivoriambe voalohany SAG Mill
Ny familiana baolina ho an'ny fivoriambe voalohany SAG milina dia manondro ny fikosoham-bary mifangaro ao anaty milina alohan'ny hahatratrarana ny SAG millages ny mari-pahaizana famoronana (na famokarana mahazatra).